एक बर्ष देखि अबरुद्ध पर्वतको भगंरा—बालाकोट सडक सञ्चालनमा ! – ebaglung.com
२०७३ चैत्र १७, बिहीबार १३:४९	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
माधब पराजुली, पर्वत २०७३ चैत १७ । पर्वतको फलेवास नगरपालिका भगंरा बेतेनी देखि महाशिला गाउँपालिका बालाकोट जोड्ने अबरुद्ध सडक सञ्चालनमा आएको छ ।
एक बर्ष पहिले देखि सडकमा झरेको पहिरो तथा कडा चट्टयानका कारण अबरुद्ध बनेको सडक खण्डमा अहिँले पहिरो तथा चट्टयान हटाएपछी सञ्चालनमा आएको हो । उक्त सडक खण्ड अन्र्तगत फलामखानी—लुखुं सडक खण्डको बिच बिचमा ठुला ठुला चट्टयान सहितको पहिरो सडकमा झरदा सडक पुर्ण रुपमा अबरुद्ध बनेको थियो । पहिरो हटाउनको लागी संसद विकास कोष बाट करिब २२ लाख रकम बिनियोजन गरिएको पर्वत क्षत्र नं. २ का सांसद विकास लम्सालका स्वकिय सचिब लोकेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।
ग्रामिण भेगको सडकमा कडा चट्टानका कारण पहिरो पन्छ्याउनका लागी निकै समय लागेको थीयो । फलेवास बाट बालाकोट जोड्ने सबै भन्दा छोटो दुरीको सडक एक बर्ष देखि अबरुद्ध हुदाँ यात्रुले निकै सास्ती पाएका थिए । उक्त सडक खण्ड अबरुद्ध हुदाँ गाडीहरु बालाकोट—लुखुं हुदै कुर्घा चिर्दीखोला भई फलेवास निस्केर सदरमुकाम कुश्मा जाने गरेका थिए ।
उक्त बैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्दा लामो सयम खर्चिनुपर्ने र कुश्मा बाट टाढा टाढा जाने यात्रु लाई बिच बाटोमै रातपर्ने हुदाँ गन्तव्यमा पुग्न लाई असहज हुने गरेको थियो । उक्त सडक खण्ड पुर्ण रुपमा सञ्चालनमा आए सगैँ अहिँले सडकमा गाडीहरु निर्बाध रुपमा गुडिरहेको स्थानिए मान बा.कुवँरले बताए । सडक खण्ड खुले पश्चात भगंरा,ठानामौला,फलामखानी,लुंखुं,भोक्सिङ,बालाकोट लगाएतका ठाउँका मानिसहरु हषर््िात भएका छन् ।
माओवादी केन्द्र तमानखोला–१ र २ को संयुक्त वडा सम्मेलन सम्पन्न !